गठबन्धन फुटाउन लागेको आरोप लगाउने प्रचण्डलाई भीम रावलको कडा काउन्टर !
काठमाडौँ – नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष भीम रावलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डलाई जवाफ फर्काएका छन्। शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले रावल प्रति लक्षित गर्दै पाँच दलको गठबन्धन फुटाउने खेल भइरहेको बताएपछि रावलले सामाजिक संजाल मार्फत जवाफ फर्काएका हुन्।
रावलले प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई हास्यास्पद र मनगढन्ते भनेका छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिनु आफू ढलेको नभई नेकपा (एमाले)लाई ढाल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको पक्षमा उभिएको भन्ने रावलको स्पष्टोक्ति छ।
“प्रतिनिधिसभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएर म ‘ढलेको’ होइन, नेकपा (एमाले)लाई ढाल्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध र स्वस्थ राजनीतिक अभ्यासको पक्षमा उभिएको हुँ । एमसीसी, नागरिकता, लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी र अन्य राष्ट्रिय हितका विषयमा प्रम देउवासँग करा गर्ने अवसर नदिई राजनीतिक भविष्य नै दाउमा राखेर निर्देशन मान भन्नु कुन विधि र गठबन्धन संस्कृति हो ?”,प्रचण्डलाई जवाफ फर्काउँदै रावलले भनेका छन्।
साथै रावलले गठबन्धन प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका मात्र भएको पनि स्पष्ट पारेका छन्। आफ्नो पार्टी फुटाएर अरू कसैका सामु लम्पसार पर्न गठबन्धनमा सामेल नभएको रावलको भनाई छ।
रावलले ट्वीटर मार्फत दिएको स्पष्टिकरण निम्न छ –
–हामीले सांसद पद मात्र होइन, राजनीतिक भविष्यसमेत दाउमा राखेर प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना र देउवाजीलाई प्रम बनाउन योगदान पु-यायौं। हाम्रो स्थितिमा हुनुभएको भए के प्रचण्डजी हाम्रोजस्तै त्याग गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो?
प्रकाशित : आइतबार, साउन १०, २०७८०८:५२
“महाकाली प्रकरणमा भारतले क्षमायाचना गर्नुपर्छ”